Archive du 20180117
Fisamborana tany Ihosy Tafaporitsaka i Tatandraza
Nahazo loharanom-baovao momba ny toerana misy an’i Marc Tatandraza ny zandarimariam-pirenena, ka voalaza fa tao Ihosy no nisy azy sy ireo antokon’olona miaraka aminy. Raha ny fakam-baovao omaly tolakandro dia raikitra ny fidinana ifotony sy fisamborana tao Ihosy, saingy tafaporitsaka kosa i Marc Tatandraza,
Tiorkia Voasazy mafy ireo mpamono mpitsoa-ponenana
Lehilahy 2 Tiorka namono mpitsoa-ponenana avy any Syria no voaheloky ny fitsarana any Sakaraya, any avaratra andrefan’i Tiorka higadra mandrapahafaty. Ireto lehilahy ireto moa dia nanolana ramatoa 1 izay niaraka tamin’ny zanany vao 10 volana. Rehefa vita ny nataony dia novonoiny izy mianaka. I Tiorka moa dia anisan’ireo firenena mandray mpitsoa-ponenana maherin’ny 3 tapitrisa avy any Siria